आफ्नो मिर्गौलाको सुरक्षाका लागि अपनाउनुस् यस्तो उपाय:: Naya Nepal
मिर्गौलाले हाम्रो शरीरलाई विषरहित (डिटक्सिफाई) बनाउने काम गर्छ । यसले शरीरमा पच्न बाँकी रहेको, विषालु र अतिरिक्त तरल पदार्थलाई पिसाबमार्फत शरीर बाहिर पुर्‍याउँछ । शरीरमा रगतलाई शुद्ध राख्न सहयोग गर्ने मिर्गौलालाई सफा राखेन भने मूत्ररोग, पेटको समस्या, ज्वरो, छटपटी र बान्ता आउने जस्ता समस्याहरू बढ्छन् । खानामा सावधानी अपनाउँदा अनि भोजनमा तीनवटा उत्कृष्ट कुराहरू समावेश गर्दा मिर्गौला सफा राख्न सकिन्छ ।
मकै छोडाउँदा तपाईंले सुनौला रंगका जुँगाहरू पनि देख्नुभएकै होला । ती रेशाहरूले मिर्गौैलालाई डिटक्सिफाई गर्छन् । अनि रगतमा चिनीको मात्रालाई सन्तुलनमा राख्न तथा रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउन पनि यो सक्षम छ । मकैको जुँगाको ड्रिंक बनाउनका लागि दुई गिलास पानी मज्जाले उमाल्नुस् । त्यसपछि कचौरामा उम्लेको पानी राखेर मकैको जुँगा राख्नुस् । अनि त्यसलाई हलुका आगोमा उमाल्नुस् । उक्त पानीमा कागतीका दुई चाना निचोर्नुस् । पानी सुकेर एक गिलासमा सीमित गर्नुस् । यस रसलाई बिहानबेलुका पिउँदा फाइदा देखिन थाल्छ । पत्थरीको समस्या भएकाहरूलाई पनि यो रस लाभदायक छ ।
‘हामी घर जाँदैनौं किनकि घरमा आमा हुनुहुन्छ र यसपालि हामी यसैमा खुसी छौं । विजयादशमीको सबैमा शुभकामना । अर्को वर्ष फेरि भन्न पाइयोस्,’ डा. रमेश कोइरालाले घटस्थापनाको दिन ट्वीटरमा लेखे ।‘हामी यसपालि दसैंमा घर जान्नौं र यसैमा खुसी छौं’ आशयको यो शुभकामना शताब्दीकै अनौठो लाग्न सक्छ धेरैलाई । दसैं मात्रै एउटा यस्तो पर्व हो, जुन पर्वले विभिन्न स्थानमा छरिएका परिवारका सदस्यलाई एक दिन भए पनि एक ठाउँमा जम्मा गराउँछ । त्यही कारण दसैं सांस्कृतिक पर्व भएको छ ।मानौं, कसैको परिवारका सदस्यबीच आपसी वैमनस्य छ । सम्पत्ति भागबन्डा, सम्बन्धमा आएका उतारचढाव वा अन्य कारणले पारिवारिक बेमेलको स्थिति भए पनि दसैंमा भेटघाट गर्ने परम्परा छ । यतिसम्म कि– कसैको बा र छोरा वा दाजुभाइबीच बोलचाल छैन, अन्य समयमा भेट हुँदा पनि बोल्दैनन् । तर, दसैंमा नबोली नबोली भए पनि आफूभन्दा ठूलाबाट टीका थाप्ने र आशीर्वाद लिने चलन छ ।यसपालि इतिहासकै फरक दसैं हुनेछ, असाध्यै सुमधुर सम्बन्ध भएकाहरू पनि टाढै बस्नुपर्ने र कुराकानी गरेरै शुभकामना लिनु–दिनुपर्ने बाध्यता छ । छिन्नभिन्न परिवारका सदस्य मात्रै होइन, टाढा रहेका आफन्तहरूबीच भेटघाट गराउने पर्व पनि हो दसैं ।अहिले विश्वरभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पहिलो पटक नेपाली समाजलाई एकजुट हुनबाट रोेकेको छ । किनकि यो भाइरस एकबाट अर्कोमा सजिलै सर्न सक्छ । संक्रमण भएपछि बालक, वृद्ध र अन्य रोगीलाई मृत्युकै मुखमा पु-याउन सक्ने भएकाले हुन सक्छ डा. कोइराला लेख्छन्, ‘विजयादशमीको सबैमा शुभकामना । अर्को वर्ष फेरि भन्न पाइयोस् ।’यो भाइरस आफैंमा यति खतरनाक छ, कतिपयलाई लक्षणै देखिन्छ । त्यसकारण स्वस्थ अनुभूति गर्ने व्यक्तिले समेत आफन्तलाई भेट्नुअघि सोच्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति छ ।
नवरात्र सुरु भएपछि विजयादशमीको शुभकामना आदानप्रदान गर्नु पुरानो प्रचलन हो हाम्रो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पार्टीका भ्रातृ संगठन र व्यापरिक प्रतिष्ठानले आकर्षक शुभकामना कार्ड बनाएर शुभेच्छुकहरूमा पु-याउने परम्परा निकै वर्ष चल्यो । जब फेसबुक, ट्वीटरमा सर्वसाधारण रमाउन थाले, कार्ड छाप्ने र बाँड्ने प्रचलनमा कमी आयो । अहिले प्रायःले आकर्षक डिजाइनको शुभकामना कार्ड बनाएर सामाजिक सञ्जालमै पोस्ट गर्छन् ।यसपालि पनि आकर्षक डिजाइन गरेर साथीभाइ र आफन्तलाई शुभकामना दिने क्रम जारी छ । तर, शुभकामना सन्देश लेख्ने भाका भने फेरिएको छ । ‘म पनि तपाईंको घर आउँदिन, तपाईं पनि मेरो घरमा नआउनुस्’ आशयका शब्दहरू अचेल धेरैको फेसबुक तथा ट्वीटर वालमा देखिन्छ ।
सरकारी एवं निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरूले दसैमै हो, सबैभन्दा लामो छुट्ट%